Inkqubo ye-GIS yeyona ndlela ilungileyo ye-GIS ye-iPad? -Izixhobo zeGeofumadas
NgoDisemba, 2013 Apple - Mac, Geospatial - GIS, SuperGIS, Topography
Kwiveki ephelileyo bendithetha nomhlobo waseCanada ondixelele ngamava ababenawo ekusebenziseni i-GIS Pro kwiinkqubo zophando ze-cadastral. Siphantse safika kwisigqibo sokuba nangona zikhona ezinye izixhobo, ukusuka kwivenkile yeApple oku ukuba ayisiyiyo eyona ilungileyo kwi-iOS, eyona izime kakuhle ekukhetheni kwabasebenzisi beselfowuni; kwaye nditsho i-iPad kuba nangona isebenza kwi-iPhone, ubungakanani bescreen bunciphisa isibonelelo esinokufunyanwa kwi-iPad mini okanye kwi-iPad eqhelekileyo.
Kanye ngoku, ukuba SuperSurv ukhulula uguqulelo yayo yokuqala ngoko kwafuneka Android, ndifuna ukuthetha kancinane malunga Pro GIS, nto leyo iya kunikwa eziya kufuneka bakhuphisane ukuba ufuna ukuya ngaphaya kubasebenzisi SuperGIS Desktop mhlawumbi sele usebenzise SuperPad , SuperField okanye SuperSurv ye-Android.
I-GIS Pro yenze ngokwaneleyo koku, ikwazi ukungenisa iifayile ze-shp, gpx, kml kunye ne-kmz. Ukuthintelwa kwayo kukungqamanisa kuba ingenguye umenzi wedesktop okanye izixhobo zeseva; Ungathumela kwelinye ilizwe kwiifayile ezifanayo, ukongeza kwi-csv kodwa apha iSuperSurv inokusebenzisa ithuba lokufunda idatha eveliswe yiSuperGIS Server hayi i-WMS kuphela kodwa kunye ne-WFS-T. Ukuba kunjalo, -ngethemba-Ngaphandle kokuhlela idatha yetabular, istenaviti sinokusebenza phantsi kolawulo lwetransekshini kunye nemigangatho yongqinisiso lwesiseko esigcinwe kwindawo yogcino; ayisiSeva yeSuperGIS kodwa yeArcSDE okanye iOracle Spatial.
Kule GIS Kit iyancinci, kuba i-iTunes / i-imeyili ayivumelanisi kodwa ukutshintshelwa kweefayile ngokulawulwa nzima. abahlobo bethu waseKhanada bakwazi ukwenza inkqubo yokugcina makwenziwe ArcSDE le Geodatabase njengoko version Pro izisa ithuba lokwabelana iiklasi osemqoka ngelifu, nangona oku kuthatha amava eyongeziweyo akukho mgaqweni ukuba imveliso eyenziwa kuthathwa njengekeykey.
Kucacile ukuba abasebenzisi abenza uhlolo lwe-cadastral, kwindawo engakhange ihlolwe ngaphambili, ukuhanjiswa kweefayile eziqhelekileyo kwanele kuba kamva kukho umsebenzi weengcali ze-GIS oya kuthi acoce idatha kwaye adibanise ulwazi esele lukhona. . Kodwa kwimeko yolondolozo lwe-cadastral, yintoni ebandakanyekayo kukwenza izahlulelo zeepropathi, ukubeka ngokwamaqela okanye ukulungiswa, nezixhobo ukuza kuthi ga ngoku ezisilelayo. Umceli mngeni kukwenza phakathi kwezixhobo ezintlanu ukuya kwezilishumi ezivumela unxantathu, imilinganiselo yeebheringi, imigama, ucofe nge-snap, wenze ukufana, ukuqinisekisa itopiki ngokuxhomekeke kwindlela yoqobo yokulinganisa, njl. Siza kubona ukuba iSuperSurv ibonelela ntoni ngoJanuwari 2014.
Ngokubhekisele kwiimephu zangasemva, iGIS Pro ixhasa imifanekiso kaGoogle kunye neBing, ngaphezulu kokwaneleyo. Ukongeza, iMephu ye-OpenStreet, i-OpenTopo, isitalato sikaGoogle / iBing kunye neenkonzo zeWMS. Kule nto umceli mngeni yeyemifanekiso egcinwe kwalapha kwi-iPad, kuba ubungakanani bememori abucingeki kodwa bayazinyanzela. Indlela kuya kufuneka ifumaneke ukulawula i-cache ngendlela efanelekileyo ngakumbi kunaleyo ikhoyo kude kube namhlanje, ndicinga ngomsebenzisi ekufuneka eye ebaleni kwaye onokunxiba umaleko Ungaxhunyiwe kwi-intanethi ingagcinwanga kodwa igcinwe kwi-iCloud phantsi kweendlela zokuhlola; ixande, umendo kunye ne-buffer, isangqa sempembelelo kwinqanaba.
ISuperSurv koku kufuneka inyuse ubuncinci kwezi nkonzo kwaye ibone ukuba bayayenza into efana nale yenziwa yiGaiaGPS, ethi nangona ijolise ekulandeleleni, ulawulo lwe-cache lwahlukile kwaye lungcono kancinci kune-GIS Pro. ISuperSurv iya kuba nakho ukufunda iithayile ezenziwe ngeSuperGIS Server kunye neefayile kwifomathi ye-stc eyenziweyo ngesixhobo seethayile yemephu yeSuperGIS Desktop, kuyakufuneka ubone ukuba i-kmz ene-orthophoto efakwe ngaphakathi inokulawulwa ngaphandle kokuphulukana nomonde.
Kucacile ukuba izixhobo eziziimobhayili azinakulindela ukuba zenze izinto ezenziwa ngumsebenzisi kwidesktop, kodwa kukho izinto esizenzileyo esizenze ngeGPS ngaphambi kokuba zibe nescreen esityebileyo esilahlekileyo. Ndiyakhumbula ukuba ngeGarmin kwakungekho mnandi ukuthatha amanqaku kwaye kubhekiswa kwimephu yangasemva; ngoku kusenziwa okuninzi kodwa kubonakala ngathi sijikeleza ngakumbi ukwenza iindlela ezilula njengokufaka inqaku kunye nokuthelekisa esele ikho.
Imisebenzi ye-GIS Pro imbalwa, kwaye singatsho ngokwaneleyo malunga nokwenza iileya, ukucima, ukuvula, ukukopa, ukuhlengahlengisa kunye nokwenza ubala. Ndinika imvume yam kodwa ndicinga ukuba inokuphuculwa kulwazi lomsebenzisi; utshintsha njani izitayile zomgca, ubukhulu okanye ubungakanani benqaku ngendlela elula. Ukuya kwinqanaba elithile, ukusetyenziswa kweminye iminwe kwiscreen kuyinkcitho, umzekelo, ukuchukumisa i icon yemenyu ngomnwe omnye kunye nezinye ezimbini ukwazi ukwenza utshintsho olusisiseko olubonisa kuphela nekungafuneki ukuba ushiye Kwiskrini ukungena kulawulo lwetemplate.
Ukuba i-SuperSurv ifuna ukukhuphisana nale nto, kufuneka isebenzise oko i-Android engenzi nto efanayo kodwa yebo iOS i-one, ezimbini, ezintathu kunye neminwe emine.
Ingxaki yokuchaneka kukusikelwa umda kwesixhobo sehardware, ke ngoko yi-GPS eziswa yi-iPad. Andazi ukuba zenze njani izihlobo ze-GIS Pro, kodwa inguqulelo yepro ivumela ukuchaneka okungcono kunendlela elula yokuhamba kwemitha ezi-3; Kuyenzeka ukuba uchaze ngokuchanekileyo nangokucoca ulwelo ngokuchanekileyo ukuze ingabambi ngaphandle kokuba uyifumene. Nangona isenza njalo, kubonakala kum ngathi ngumceli mngeni ukusukela ngoku ukuya kusetyenziso lweselfowuni; ukufezekisa njani ukuchaneka ngaphandle kokufuna i-4G, usebenzisa ithuba lokudityaniswa kwezitishi ezizinzileyo ngeseva ... ukuba akunjalo, kunye nokulungiswa kwangemva. Ingxaki nge-GIS Pro kukuba oku kuchaneka akuqinisekiswanga, kuxhomekeka kwizinto ezininzi eziguquguqukayo; engabalulekanga kwiiprojekthi ezinokusetyenziswa komhlaba okanye indlela yokusebenzisa umhlaba, kodwa ngendlela esemthethweni. Nokuba yeyiphi indlela, ndicinga ukuba yeyona GIS Pro ilungileyo-ubuncinane ekunikeni-.
Okwangoku akukho lula ukuyiqinisekisa, kodwa kuya kuba kokufanelekileyo ukuqokelela idatha ikwimeko efanayo ne-iPad kunye ne-Android, kwangaxeshanye, kunye ne-GIS Kit kunye ne-GIS Pro uze uthelekise ukuba iyinyani ngokuchanekileyo ... ngenxa yoko amazwe apho unxibelelwano aluhambelani. Okwangoku ndiza kudlala ingxelo endiyifumene kwiSuperSurv kwaye ndiyithelekise neGIS Kit, kwaye ndiza kukuxelela apho.
Ndiyathandabuza ukuba iSuperSurv yenza kakhulu ngokuchaneka, nangona zisebenza kakuhle kakhulu neSuperPad eneGNSS eyandisiweyo ... ewe, kwi-GPS exhasa iiWindows Mobile.
Kutheni i-GIS Pro iyakwamkela kakuhle?
Asikwazanga ukugqiba kwelokuba esi sesona sicelo sigqwesileyo se-GIS se-iPad, kodwa kubonakala kuyinyani, emva kokubonisana nabasebenzisi abo bayithandayo, ndifika kwisigqibo sokuba kungenxa yokusebenza kwayo lula kubathandi be-mac «akukho zengcali zeGIS«, Ubuncinci hayi kwi-GIS yobunini. Ndiyathetha, abasebenzisi be-ESRI baya kusebenzisa iArcPad, iSupergis SuperSurv, iBentley Navigator Pano… kodwa ufuna umntu:
Yenza iklasi yezinto ezibonakalayo kwi-tablet
Chaza iqoqo lohlobo lwendawo, umgca, ipoloni, indlela
Beka iimpawu ezifana nesithombe, uphawu, itekisi, uluhlu lwamaxabiso
Cwangcisa icebo lokucoca ixesha, umgama, ukuchaneka kunye nokuchaneka kwe-ultra
Lawula idatha kwi-Lat / ende, i-UTM, iMGRS kunye ne-USNG
Ukuthwala phantse nayiphi na i-raster / isitrato esisezantsi
Yabelana ngeeklasi zeeklasi ngokusebenzisa iCloud
kwaye konke oku ngaphandle kokusebenzisa isixhobo sedesktop ...
Ukhuseleko lwe-GIS Pro lukhethile.
Ukuba amanye amaqonga afuna ukukhuphisana ne-GIS Pro ... qala ngokukhangela ukuba benze njani ngokuchanekileyo ngokuchanekileyo.
Post edlulileyo«Ngaphambilini IBrazil ngokokubona kweNkomfa yoNyaka “yokuSekwa ​​kweziSeko” elandelayo
Post Next Yenza imephu yonyulo eneeFusiontables- kwimizuzu eli-10Okulandelayo »
2 Uphendula kwi- "GIS Pro EyonaGIS App ye-iPad?"
Into enhle isicelo sisebenze kuwe.
Mna iminyaka emibini usebenzisa Giskit pro, kwaye eliphezulu kakhulu app intuititiva kunye nokuphathwa lula kubasebenzisi onolwazi oluncinane lwe-GIS, ulawulo geotif ayihlelanga ndawoni kakuhle, le shapefile lula ukuba imali ngeposi kunye lwebhokisi. Kukho ezininzi iipropati zokuthetha. Ngencomo yale webhusayithi ndithenga le app.